R/wasaare Saacid Oo Isbitaalka Ku Booqday Dhaawacyada Qaraxii Baledweyne * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baledweyne, Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa maanta booqday dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay weerarkii shalay kooxaha nabadiidka ay ku qaadeen saldhiga degmada Beledweyne kuwaasoo isla shalay dawladdu u dirtay diyaarado lagu soo daabulo si ay u helaan daweyn deg deg ah.
Dhaawacyadan oo ay tiradoodu gaareyso 13 una badan dad rayid ah ayuu Ra’iisul wasaaruhu ku booqday qolalkooda, wuxuuna alle uga baryay inuu caafimaad deg deg ah siiyo.
“Runtii dadkan waxaa dhibaateeyey gacan ka xaq daran, mana jirto wax dembi ah oo ay galeen, dawladduna waxay ku howlan tahay sidii dalka looga sifeyn lahaa argagixisada” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid oo xusay in kooxahan nabad diidku ay marayaan marxaladdihii ugu dambeeyey ee dhamaadkooda.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Cabdi Faarax Shirdoon ayaa booqday xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga, halkaasoo uu kula kulmay saraakiisha sar sare ee ciidanka xooga dalka, waxaana ku wehlinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee xafiisyada wasaaradda oo ay xilligaasi ka soconayeen howlo baaxad leh oo ku aadan maamulka ciidanka. “Mudnaanta dawladda waa amniga iyo xasilinta dalka, dawladda Soomaaliyana waxaa ka go’an xoojinta tababarada ciidamada, kor u qaadidad adeega caafimaadka ee ciidanka, qalabeynta iyo mushaaraadkooda” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo la hadlayay saraakiisha ciidanka.
Shalay ayaa waxaa magaalada Baledweyne ka dhacay qarax iyo weerar isxigay oo Alshabaab ku qaadeen saldhiga booliska Baledweyne, kaasoo ay ku geeriyoodeen ilaa 29 ruux.